Otú nyefee Photos si iPad ka Computer
> Resource> iPad> Easily Nyefee Photos si iPad ka Computer
M nwere 5GB nke foto na m iPad nke e nweghị ndabere. M na mbụ depụtaghachiri foto ndị a na iPad si a PC. Otú ọ dị, m na mberede formatted mbanye ebe photos e echekwara na PC. M na-agbalị iji naghachi ha na-enweghị ihe ịga nke ọma. Enwere ụzọ nyefee ha site iPad ka PC eji ihe ngwa, ngwa, ma ọ bụ anataghị ikike? N'ụzọ doro anya, nyere ọnụ ọgụgụ na size nke faịlụ, emailing ha abụghị na-anara ngwọta. Daalụ n'ọdịnihu.
Achọtaghi a ngwọta na-ebufe foto site na iPad na kọmputa? Echegbula. Ị nwere ike na-agbalị Wondershare TunesGo (Windows). Ọ bụ ọkachamara iPad photos njikwa nke e mere idetuo gị iPad photos na kọmputa mere na ị pụrụ ele ha ma ọ bụ ịkọrọ ha kpam kpam. E wezụga na-edegharị foto site na iPad na kọmputa, a ngwa na-enyere gị mbubata foto site na kọmputa na-iPad na ike albums na-azọpụta ha.
Cheta na: bụrụ na ị nwere iMac, MacBook Pro ma ọ bụ MacBook Air, ibudata Wondershare TunesGo (Mac) idetuo foto site na iPad gị Mac.
Bugharịa foto site na iPad na kọmputa na 2 nzọụkwụ
Na-esonụ akụkụ, ka m gosi gị na nzọụkwụ -e sitewo-nzọụkwụ ntụziaka banyere otú nyefee iPad foto na kọmputa runing Windows arụ ọrụ usoro.
Na-amalite na, malite TunesGo na kọmputa mgbe wụnye ya. Jiri eriri USB na-abịa na gị iPad jikọọ gị iPad na kọmputa. Site n'ime nke a, gị iPad ga-ghọtara anya.
iTunes dị mkpa iji na wụnye na kọmputa, iji jide n'aka na Wondershare TunesGo arụ ọrụ.
Nzọụkwụ 2. mmekọrịta foto site na iPad na kọmputa
Pịa "Photos" taabụ na ekpe ndekọ osisi. Mgbe ahụ, họrọ foto ma ọ bụ albums. Pịa "Export ka". Mgbe ahụ, họrọ a zọpụta ụzọ na-echekwa exported albums ma ọ bụ foto. Echefukwala na-gị iPad ejikọrọ niile n'oge transfer usoro.
Wondershare TunesGo akwado iPad ụdị dabeere iOS 5/6/7, dị ka iPad na Retina ngosi, iPad Obere na iPad 2. The foto transfer dịruru otu ma ọ bụ abụọ nkeji. Mgbe ahụ, gị niile chọrọ photos ga-depụtaghachiri gị na kọmputa. Ugbu a, ị na-enwe ike ma ịhụchalụ ha ma ọ bụ ịkọrọ ha na uche.
The video banyere otú nyefee foto site na iPad na kọmputa